“Ciyaartoyda waxay ka baqaan imaatinka kooxda Barcelona, sababa la xiriira Messi” – Rivaldo – Gool FM
(Spain) 21 Maajo 2019. Halyeeyga reer Brazil iyo kooxda Barcelona ee Rivaldo ayaa ka hadlay suurtagalnimada uu Antoine Griezmann ugu dhaqaaqi karo garoonka Cump Nou, inta lagu gudi jiro suuqa kala iibsiga ee xagaaga.
Rivaldo ayaa xaqiijiyay in laacibka reer France ee Antoine Griezmann oo 28 sano jir ah, uu yahay xiddiga koowaad ee kooxda Atletico Madrid, laakiin Lionel Messi ee ku sugan Barcelona uu sameeyano wax walba, taasoo ah sababta ay inta badan ciyaartoyda kaga cabsadaan imaatinka kooxda reer Catalonia, waxaana ka mid ah Griezmann.
Hadaba wargeyska “AS” ee dalka Spain ayaa wuxuu shaaca ka qaaday wareysi uu bixiyay halyeeyga kooxda Barcelona ee Rivaldo waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Haddii Antoine Griezmann uu yimaado Barcelona, waa inuu la yimaadaa shakhsiyad xoogan si uu isbeddel ugu sameeyo ciyaartoyda sida Messi iyo Suarez”.
“Ma garanayo haddii uu doonayo inuu yimaado kooxda Barcelona, sababtoo ah ciyaartoy badan ayaa ka cabsanaya inay yimaadaan, sababa la xiriira inuu joogo Lionel Messi, maadaama wax walba ee ku saabsan garoonka Cump Nou ay isaga quseeyaan”.
“Marka ay sheekada quseyso Atletico Madrid Antoine Griezmann ayaa ah xidiga wax walba go’aamiya, laakiin hadii uu yimaado kooxda Barcelona, way kala duwanaan doontaa sababtoo ah Lionel Messi waa kan wax walba halkaas sameeya, sidaas darteed waa inuu sameeyaa waxa uu ka sameeyay kooxda Atletico”.
Si kastaba ha ahaatee, laacibka reer France ee Antoine Griezmann ayaa mudo 5 xili ciyaareed ah uu ku sugnaa kooxda Atletico Madrid wuxuu u dhaliyay 133 gool, isagoo dhinaca kale bixiyay 50 caawin, kaddib 253 kulan uu ciyaaray.